Violik ma ọ bụ Elbe Shield (Polish Łabski Szczyt, German Veilchensteine ​​ma ọ bụ Veilchenspitze), bụ ugwu nke dị na Silesian Ridge na Giant Mountains, n'ókè ala Czech Republic na Poland. Ọ bụ ọnụ ọnụ ugwu na-agbago elu ya na ọnụ ọnụ ugwu. Ugwu dị na 1 km north of Labská bouda, 5,5 km north of Dolní Mísečky and 6 km from Polish Piechowice.
You nwere ike iru nchikota a na-acha ọbara ọbara akara nke akara Czech-Polish. Ọ na-agafe n’elu nkume dị elu site na ndịda akụkụ ebe dị anya site na mita 40. Nkume n'onwe ya dị na mpaghara nke I Giant MountainsNational Park ma yabụ ọgaghị enweta ndị njem nleta. Site n’elu elu ahụ elu bụ ezigbo elele nke ugwu, Giant Mountains na Jeleniogor Basin.
Elekere 24 gara aga